अन्धकार शब्द आफैमा एक डर लाग्दो शब्द हो। तर यथार्थमा अन्धकार नभई रोशनिको उदय हुदैन अर्थात अन्धकारको सामना गर्न उज्यालो चाहिन्छ । उज्यालो खोज्नु पर्दछ अथवा भनौ ब्याकअप राख्नु पर्दछ। चाहे त्यो रातिको समयमा घरमा बिजुलि नहुदा होस वा हामी मान्छेको जीवनमा आईपर्ने समस्या वा अन्धकार नै किन नहोस। यी र यस्तै अन्धकार बाट मुक्ति पाउनका लागि तपाईं हामीलाई रोशनि ( उज्यालो ) को आवश्यकता पर्दछ वा भनौ ब्याकअप चाहिन्छ । घरमा भएको अध्यारो हटाउनका लागि हामिले विभिन्न प्रकारको बैकल्पिक ब्यवस्था गरेका हुन्छौ वा भनौ ब्याकअप तयार राखेका हुन्छौ। फलस्वरूप घरमा अध्यारो हुने बित्तिकै ब्याकअपको सहायताले उज्यालो बनाउदछौ।
एवम् प्रकारले हामी मान्छे लाई पनि बेला बखतमा आफ्नो जीवनकालमा यी र यस्तै प्रकारका अन्धकारको सामना गर्नु परिरहेको हुन्छ। चाहे त्यो २०७२ सालको प्राकृतिक बिपद भुकम्पका बेला होस या बिगत एक बर्ष देखि बिश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड १९ महामारीले निम्त्याएको घटना नै किन नहोस।यी र यस्ता घटना दुर्घटनाले हाम्रो घरपरिवारमा निम्त्याउने अन्धकार लाई कसरी सामना गर्ने , यसको ब्याकअप कस्तो प्रकारले तयार राख्नु पर्दछ भन्ने बिषयमा तपाईं हामिले त्यति चासो दिएको जस्तो देखिदैन ।हामिले धेरैजसोलेभन्ने गरेको सुन्ने गर्दछौ जस्तो पर्ला त्यस्तै टर्ला ।
तर वास्तविक रुपमा यी शब्द सुन्दा जति छोटा र सहज जस्ता लाग्दछन आफू र आफ्नो परिवार माथि समस्या परिसके पछिको भोगाई भने त्यति सहज हुदैन । यस्ता थुप्रै घटनाहरूको तपाईं साक्षि बनी सक्नु भएको छ।
तपाईं भनेको आफ्नो परिवारका लागि सबै थोक हो। तपाईं तपाईंको घरको रोशनि हो, कमाउने मान्छे हो , खानलाउन दिने मान्छे हो।परिवारका सबै आवश्यकता पूरा गर्ने मान्छे नै तपाईं हो एक छिनका लागि सोच्नुस त ! मान्छेको जन्म जसरि निश्चित छ त्यसरि नै जन्मे पछि मृत्यु पनि निश्चित नै छ तर जन्मने समयका बारेमा सबैलाई थाहा हुन्छ भने मृत्यु कहिले कहाँ कसरी हुन्छ कसैलाई थाहा छैन। यहि मृत्युको कारणले घरपरिवारमा छाउने अन्धकारमय अवस्था बाट परिवारलाई कसरी सहज अवस्थामा ल्याउने भनी यदि तपाईं सोच्नु हुन्छ भने त्यसको एउटा मात्रै सहज उपाय हो जीवन बीमा गरि राख्नु पर्ने। केवल जीवन बीमा ।
यदि तपाईंले आफ्नो जीवन बीमा गर्नु भएको छ र तपाईंलाई तपाईंको परिवारले भौतिक रुपमा गुमाउन पुगे पनि तपाईंले गरेको जीवन बीमाका कारणले उहाहरुले जीवन बीमा बाट प्राप्त गर्ने रकमले घरपरिवारको आर्थिक अवस्था लाई माथि उकास्ने देखि लिएर तपाईंको उपस्थितिमा जसरि परिवारको पालन पोषण र बालबालिकाको शिक्षा दीक्षा भैरहेको थियो तपाईं नरहदा पनि बीमाका कारणले तपाईंले देख्नु भएको सपना, बालबालिकाको पढ्ने लेख्ने सपनालाई तुहिन दिदैन। हो भौतिक रुपमा तपाईंको परिवारलाई तपाईंको कमि रहन्छ तर तपाईंले गरेको जीवन बीमाले गर्दा उहाँको सपना पूरा हुने गर्दछन।
बिकसित देशहरुमा त बच्चा जन्मने बित्तिकै उसको भविष्यका लागि भनेर जीवन बीमा गर्ने गरिन्छ । जीवन बीमा गर्नुको फाईदाका बारेमा बुझ्नुपर्दा जीवन बीमा एक अनिवार्य बचत योजना हो जुन तपाईं ( बीमा गर्ने ब्यक्ति ) र कम्पनी को बीचमा सम्झौता बनेको हुन्छ। तपाईंको उमेर , तपाईं ले लिन चाहेको थप सुबिधाहरु, तपाईले चाहेको समयसम्म र तपाईंले छनौट गर्नु भएको बीमाको प्रकृतिको आधारमा तपाईंको अनिवार्य बचतको रकम कम्पनीको एप मार्फत तोकिने गर्दछ । यसले गर्दा एकातिर हाम्रो फजुल खर्च गर्ने बानिमा पनि परिवर्तन आउदछ भने अर्काे तिर परिवारका लागि र आफ्ना भबिष्यको लागि भनेर बचत पनि भैरहेको हुन्छ। हुनत यहाँ कुरो बचतको गर्दै गर्दा पैसालाई त हामी बैंक खातामा पनि बचत गर्न सक्छौ नि त भनेर भनिन्छ ।
हो बैकमा पनि बचत हुने गर्दछ बैकले हाम्रो बचत भएको रकमको ब्याज पनि दिने गर्दछ। तर बैकले हामिलाई जोखिम बहन सुबिधा चाहिँ दिदैन। तर बीमा कम्पनीले हाम्रो बचत रकमको ब्याज पनि दिन्छ र हामी र हाम्रो परिवार माथि आईपर्ने विभिन्न खालका जोखिम जस्तै बिमितको दुर्घटना बाट मृत्यु हुदा बिमाङ्क र बिमाङ्क बराबरको थप रकम सहित बचत रकम बोनस सहित फिर्ता दिने, कालगति बाट हुने मृत्युमा बिमाङ्क रकम र बचत रकम बोनस सहित दिने, मान्छेका लागि मृत्युु मात्रै जोखिम होईन विभिन्न कारणले मान्छे अंगभंग अपांग अशक्त हुन सक्दछ यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीले बिमाङ्क रकम तत्कालै उपलब्ध गर्ने र बाकि समयको अनिवार्य बचत रकम बीमा कम्पनिले नै ब्यहोर्ने , साथै विभिन्न प्रकारका घातक रोगहरुको उपचारका लागि रकम उपलब्ध गर्ने सम्मका सुबिधाहरु कम्पनी ले उपलब्ध गराउने गर्दछन।
नेपालमा हाल सम्म १९ वटा जीवन बीमा कम्पनिले बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन। सबै कम्पनिका आ आफ्ना किसिमका बिमा योजनाहरु रहेका छन । बीमा गर्दा हामिले हचुवाका भरमा बीमा गर्नु हुदैन । कम्पनिको पृष्ठभूमिका बारेमा राम्रोसंग बुझ्ने, कति पुरानो हो , कस्तो सेवासुबिधा प्रवाह गरेको छ, कम्पनीको बोनस दर कति छ, कम्पनिले भुक्तानिमा कति समय लगाउछ। भबिस्यमा हामिले पाउने सेवा सुबिधा के के हुन कति हुन यी तमाम कुराको जानकारी पश्चात् बीमा गर्नु भएको खण्डमा तपाईं सधैं बीमा कम्पनी प्रति सकारात्मक र सबैलाई बीमा गर्नु भन्ने सुझाव दिने ब्यक्ति बन्न सक्नु हुनेछ।
झन अहिलेको कोभिड १९ को बिश्वब्यापी माहामारिको कारणले त जीवन बीमाको आवश्यकता अझै बढि महसुस गराएको छ। यो महामारिको सिकार को कति बेला हुन्छ कसैलाई थाहा छैन। तपाईं हाम्रो आँखा अगाडि नै तपाईंका प्रिय ब्यक्तिहरु पत्याउनै नसकिने हिसाबले तपाईंले गुमाई राख्नु भएको छ । यो तितो सत्य हो।यसरी परिवारले आफ्नो सबै थोक भन्ने बस्तुलाई गुमाउदा के अब पहिले जस्तै सहज रुपले उहाहरुको आर्थिक हैसित स्थिर रहन सक्ला त? हो यसको एउटामात्र उपाय हो उहाले गर्नु भएको जीवन बीमाका कारणले उहाहरुको घरपरिवारको आर्थिक हैसियत पुरानै रुपमा स्थिर रहने छ।
संक्षेपमा भन्नू पर्दा भबिष्यका लागि बचत र जोखिम सुरक्षाका लागि जीवन बीमा अनिवार्य रहेको छ। जीवन बीमा गरौ।ढुक्क रहौ।
( लेखक– तुलसी चन्द नेशनल लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनी चेयरपर्सन क्लबमा आबद्ध ब्यक्ति हुन)
प्रदेश सरकारबाट फिर्ता नहुनेलाई कारबाही हुन्छ : अध्यक्ष कर्ण थापा